Sat, Jul 11, 2020 at 9:04pm
मंगलवार, चैत्र २५, २०७६ साल
काठमाडौं, २५ चैत । चीनको हुबेइ प्रान्तको वुहान सहरबाट फैलिएको नोवेल कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको संक्रमण अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोनाको संक्रमण विश्वका २ सय भन्दा बढी देशमा देखिइसकेको छ । विभिन्न देशले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हर सम्भवको तौर तरिका अपनाएका छन् । नेपालमा पनि एउटा त्यस्तै तरिका अपनाइएको छ । कुनै..
काठमाडौं, २४ चैत । सरकारले लकडाउनकाे अवधि ८ दिन थप गरेको छ । सोमबार अपराह्न सकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैशाख ३ सम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । लकडाउनको अवधि दोस्रो पटक थपिएको हो । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को दोस्रो संक्रमित भेटिएपछि सरकारले चैत ११ बाट १८ गते बिहान छ बजेसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरेको थियो । त्यो अवधि पूरा नहुँदै २५ गतेसम्म थपियो । तर,..
काठमाडौैं, २४ चैत ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, पूर्व डेपुटी गभर्नर तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र पूर्व सचिव राजन खनालको नाम सिफारिस गरेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा पुर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा रहेका थिए। उक्त समितिले आगामी गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको..
काठमाडौं, २४ चैत । आन्तरिक राजश्व विभागले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करको अवधि थप गरेकाे छ । विभागले आइतबार सूचना जारी गरी कर विवरण र विवरण अनुसार लाग्ने करहरु बुझाउने समय थप गरेको हो । नेपाल सरकारको चैत १८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार त्यस्तो समयावधि थप गरिएको विभागले जनाएको छ । थप गरिएको समय अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करको फागुन महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र..
काठमाडौैं, २४ चैत । लकडाउनकाे अवधि एक साता अझै लम्ब्याउन साेमबार अपराह्नल मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्ने भएकाे छ । अपराह्न चार बजे बालुवाटारमा बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लकडाउन लम्ब्याउने र नियमित विषयमा निर्णय हुने बताइएको हाे । कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले कम्तीमा एक साता लकडाउन लम्ब्याउने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दियो । सरकारले पहिलोपल्ट चैत्र ११ गतेदेखि साताव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेको थियो..
आईतवार, चैत्र २३, २०७६ साल
धनगढी, २३ चैत। कोरोनाका थप तीन संक्रमित भेटिएपछि आजदेखि धनगढी बजार पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ अस्पताल बाहेक सबै क्षेत्र बन्द भएका छन् । आज बजारमा कुनै पनि पसल खुलेका छैनन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाले शनिबार विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै सम्पूर्ण पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस अवधिमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु होम डेलिभरी गर्न उद्योग वाणिज्य संघ कैलाली, किराना व्यवसायी..
काठमाडौं, २३ चैत । काेराेना भाइरस संक्रमितकाे संख्या बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लकडाउन लम्ब्याउन माग गरेकाे छ । कैलालीको एक स्थानीय व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रदेश सरकारको उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनको अवधि लम्ब्याउन केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरेको हाे । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश शाहले संक्रमण थप फैलिन नदिन लकडाउन अवधि लम्बाउने निष्कर्षसहित केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । कोरोना रोकथाम..
कञ्चनपुर, २३ चैत । स्थानिय तहमा विशेष गरी लकडाउनको प्रत्यक्ष्य प्रभाव परेको छ । अति विपन्न वर्गमा देखिएको खाद्यान्नको अभावलाई मध्यनजर गर्दै कञ्चनपुुरका युवाहरुले गरीब तथा विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेका छन् । बेलौरी नगरपालिकाका दुुई सक्रिय संगठन बेलौरी काठमार्डौ समाज र बेलौरी युवा मञ्च जापानले उक्त नगरपालिका भित्रका वडा नं ३, ४, ५ र ५ का ५० विपन्न र अशक्त..
काठमाडौं, २३ चैत । सरकारले एक प्रदेशाबाट अर्को प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एक स्थानीयतहबाट अर्को स्थानीयतहमा आवागमनलाई कडाई गर्ने भएको छ। अनावस्यक आवागमनलाई सरकारले रोकेको हो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि यसो गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए। स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनइने निर्णय सरकारले गरेको हो। शनिबारसम्म ९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पहिलो पटक धनगढीमा स्थानीयतहमा..
शनिबार, चैत्र २२, २०७६ साल
काठमाडौं, २२ चैत । प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएकाहरुको सूचना सरकारले लुकाएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले कोरोनाका आशंकामा निजी क्षेत्रबाट चलेका अस्पतालले बिरामीको उपचार गर्न अस्वीकार गरेको र केहीको ज्यान समेत गएकाले सरकारले सूचना प्रणाली विश्वसनीय नदेखिएको बताएका हुन्। ‘कोरोना आशंकामा निजी क्षेत्रबाट चलेका अस्पतालहरुले बिरामीको उपचार..
काठमाडौं, २२ चैत । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या ९ जना पुगेको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमित थप ३ जना फेला परेसँगै संक्रमितको संख्या ९ पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मुम्बइबाट फर्किएका कैलालीका २१ वर्षीय पुरूषमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ । यस्तै भारतकै उत्तराखण्डबाट फर्किएका कञ्चनपुरका ४१ वर्षीय पुरूष पनि कोरोना पुष्टि भएको..
काठमाडौं, २२ चैत । शनिबार ४ बजे बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन र स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका विषयमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न लागेकाे बताइएकाे छ । सरकारले चैत २५ सम्म लकडाउन घोषणा गरेको अवस्थामा यसलाई निरन्तरता दिने/नदिने बारेमा पनि मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुने स्रोतले जनाएकाे छ । त्यसैगरी बालुवाटार स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका सम्बन्धमा पनि आजको बैठकमा छलफल हुने र..
काठमाडौँ, २२ चैत । कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरू खरिद गर्ने प्रक्रिया नेपाली सेनाले रद्द गरेको छ । सरकारले आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री जिटुजीमार्फत ल्याउने भएपछि सेनाले खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको हो । सरकारबाट प्राप्त १० करोड र सेना आफैंले ७ करोड गरी १७ करोड रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सेनाको तयारी थियो । सेनाले स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री..
विराटनगर, २२ चैत। लकडाउ’ उलंघन रोक्न खोज्दा मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१ मा नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेतामाथि छुरा प्रहार भएको छ। कांग्रेसका पूर्व क्षेत्रीय सदस्य ६५ वर्षीय दिलिप तामाङमाथि शुक्रबार साँझ ७ बजेतिर छुरा प्रहार भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका डीएसपी दिलिप गिरीले बताए । विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनउल्लंघन हुने क्रम बढेपछि स्थानीय स्तरमा..
काठमाडौ, २२ चैत। स्वार्थ समूहको प्रभावमा आफूलाई छक्याएर स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेकामा प्रधानमन्त्री दुई मन्त्री र सचिवालयका सदस्यसँग आक्रोशित भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनियमितता भएको थाहा पाउनासाथ ओम्नी समूहसँगको सम्झौता तोडेका थिए । अचम्म त तीन घण्टा मात्र बोलपत्र आह्वान गरेर सम्झौताको जिम्मा दिइएको थियो । महँगो रेटमा सामग्री खरिद गर्नेदेखि कहिल्यै स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति नगरेका कम्पनीलाई कमिसनका..
शुक्रबार, चैत्र २१, २०७६ साल
काठमाडौँ, २१ चैत । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोखरामा हालसम्म कसैलाई पनि कोरोनाको संक्रमण नदेखिएको बताएको छ । मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले उक्त कुराको पुष्टि गरेका हुने । उनले नेपालमा हालसम्म ६ जनामा कोरोनाको संक्रमण भेटिएको ति मध्ये टेकु अस्पतालमा २ जना, बाग्लुङमा २ जना तथा धनगढीमा एक जनाको उपचार भएको र एक जना पहिले नै निको..
काठमाडौं, २१ चैत । नेपालमा काेराेना भाइरस संक्रमितकाे दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेकाे छ। शुक्रबार काेराेनाकाे साताैं संक्रमित फेला परेका छन् । कोरोनाको छैटौं संक्रमित फेला परेको भोलिपल्टै भारतबाट फर्किएका कास्कीका एक व्यक्तिमा कोरानाको संक्रमण देखिएको हो । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेको परीक्षणमा कोरोनाको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए । चिकित्सकका अनुसार, कोरोनाको परीक्षण तीनपटक गरिन्छ । पहिलोपटक..
काठमाडाैं, २१ चैत। ‘काठमाण्डू प्रेस’ न्युज पोर्टलको सिस्टमभित्र अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेर कन्टेन्ट ह्याक गरेको सिरान टेक्नोलोजिजले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार असगर अलीको निर्देशनमा उनका प्राविधिकहरूले न्युज पोर्टलको नयाँ एड्मिन सिर्जना गरेका थिए । अनधिकृत रूपमा अर्काको सिस्टममा छिरेर डाटा म्यानुपुलेट गर्ने कामलाई ह्याकिङ भनिन्छ । यस्तो साइबर अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गर्ने कानुनी प्रावधान छ..
दार्चुला, २१ चैत। गरिबीका कारण रोजगारीका लागि भारत गएका नेपाली स्वदेश फर्किन खोज्दा नेपाल सरकारले रोकेपछि सीमा नाकामा उनीहरूको बिजोग भएको छ। ‘भारतको गाँसभन्दा आफ्नो मुलुकको माटो प्यारो, सरकार हामीमाथि अत्याचार नगर। हामीलाई नेपाल लैजाऊ। हामी तिमीले जहाँ राख्छौ त्यहाँ १४ दिन क्‍वारेन्टाइन बस्न तयार छौं’, दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाका धनजित महताले भने, ‘यो चिसो स्टेडियमको सिमेन्टको भुइँले शरीर सुन्निन थालेको..
काठमाडाैं, २१ चैत। सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण जीटुजी (सरकार–सरकारबीच सम्झौता) मार्फत ल्याउने भएको छ । चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरिद प्रक्रियाबारे निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्मा उक्त दिन औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा पाएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई) का विषयमा भने केही चर्चा गरिएको थिएन। वाणिन्य..
काठमाडौं, २१ चैत । सरकारले लकडाउनको समयमा पनि उद्योग र ठूला आयोजनाको काम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले शर्तसहित उद्योग र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थ तथा सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री डा. युवराज..
बिहिवार, चैत्र २०, २०७६ साल
काठमाडाैं, २० चैत । प्रदेश-५ बुटवलबाहेक सबै प्रदेशमा कोरोना परीक्षण सुरू भएको छ। बुटवलमा शुक्रबारदेखि परीक्षण सुरू गर्ने तयारी रहेको प्रदेश-५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताएका छन्। सरकारले डेढ घण्टामै कोरोना परीक्षण गर्न मिल्ने पोर्टेवल पिसिआर मेसिन पाँच वटा प्रदेशलाई वितरण गरेको छ। प्रदेश-१ को धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भने बुधबारबाटै परीक्षण सुरू भइसकेको छ। प्रयोगशालाले पहिलो लटमै..
१९ चैत, काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले तेलको मूल्य घटाएको छ । कोरोनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको हो । १ अप्रिल २०२० मा ईन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त मूल्यअनुसार निगम संचालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजल/मटितेलको साविकको खुद्रा विक्री मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घटाएको छ । काठमाडौंको..
१९ चैत, काठमाडौं । विवादास्पद स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता रद्ध भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग भएको उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण देखिएसँगै विभागले चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन यो समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले मन्त्रालयले बनाएको कोटेसनभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरिएको स्वीकार गरे..
काठमाडौं, १९ चैत । बजार मूल्यभन्दा चार गुणासम्म महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले मन्त्री ढकालविरुद्ध बुधबार अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् । मिडिया अनि आम नागरिकले प्रश्न उठाइरहँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिन नपर्ने भन्ने अभिव्यक्ति आउँदा थप शंका..
काठमाडौं, १९ चैत । हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको मेडिकल सामाग्रीहरूबारे फेरि अर्को विवाद सुरु भएको छ । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले सरकारले एक अर्ब भन्दा बढी मूल्यका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेको कम्पनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागमा दर्ता नै नरहेको दाबी गरेपछि त्यस विषयमा फेरि जनचासो बढेको हो । बुधवार दिउँसो फेसबुकमार्फत उपाध्यायले अब फेरि अर्को लफडा सुरु..
मंगलवार, चैत्र १८, २०७६ साल
काठमाडाैं, १८ चैत। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाएको कोषमा पूर्वराजपरिवारले दुई करोड सहयोग गर्ने भएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवार पनि सदस्य रहेको हिमानी कोषमार्फत् यो रकम सहयोग गर्न लागिएको हो । मंगलबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले यो महामारीमा सरकारले ल्याएका निर्देशन पालना गर्न पनि नेपालीहरुलाई अनुरो गरेका छन् । विज्ञप्तिमा लकडाउन अनिवार्य..
काठमाडाैं, १८ चैत। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताललाई अत्यावश्यक सेवा नरोक्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई ‘इमरजेन्सी’ सेवा नरोकि बिरामीको औषधि उपचार गर्न निर्देशन दिएका हुन् । अस्पतालमा ज्वरोका बिरामी जाँदा उपचार नगरिरहेको मृत्युको मुखमा पुगेको भन्दै उनले ज्वरोका बिरामीको उपचार गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 'अस्पतालले ज्वरोका..
काठमाडाैं, १८ चैत । नयाँ वर्ष २०७७ सालमा केन्द्र सरकारले दिने सार्वजनिक बिदाको सूची सार्वजनिक भएकाे छ । सरकारले नयाँ वर्ष २०७७ मा केन्द्र सरकारले दिने सार्वजनिक बिदाको सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हाे। सचिव महेश्वर न्यौपानेले जारी गरेको पत्रमा ५२ शनिबार बिदा उल्लेख छ भने पर्व, जयन्तीलगायतमा बिदा दिने उल्लेख छ। नयाँ वर्ष वैशाख १ मा बिदा हुनेछ। यस्तै महाशिवरात्री फागुन २७,..
काठमाडौं, १८ चैत। प्रेस काउन्सिल नेपालले १४ वटा वेबसाइटलाई नेपालबाट हेर्न नमिल्ने बनाउन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । चैत १० गतेदेखि १६ गतेसम्म कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणका सम्बन्धमा जथाभावी प्रचारप्रसार गर्ने १४ वटा वेबसाइटलाई नेपालभर प्रकाशन/ प्रसारण हुन नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको प्रेस काउन्सिल नेपालका सह–प्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी दीपक खनालले जानकारी दिए..
Results 9831: You are at page 27 of 328